Sidee ayuu dhulkeenu ahaan doonaa 250 milyan oo sano gudahood? | Saadaasha Shabakadda
Sidee ayuu dhulkeenu ahaan doonaa 250 milyan oo sano gudahood?
Marka loo eego aragtida 'plate Tectonics', shelf-ka qaaradeed ee meeraheenna waxaa loo qaybiyaa taarikooyin si isdaba joog ah u socda, taas oo ay ugu wacan tahay qulqulka qulqulka ee marada dhulka. Dhaqdhaqaaqa joogtada ah ee qaaradaha ayaa sababi doona taas 250 milyan oo sano gudahood, dhulkeenu uma eka sida uu maanta u eg yahay.
Malaayiin sano ka hor, markii la sameeyay badaha iyo qaaradaha, waxaa jiray kaliya hal, Pangea. Maanta, dhaqdhaqaaqa taarikada waxay u egtahay inuu kala-gooyo qaaradaha, sidaa darteed waxaa imaan doona waqti, in badan oo kala maqnaan ka dib, ay dib isugu soo laaban doonaan. Sidee ayuu dhulkeenu ahaan doonaa 250 milyan oo sano gudahood?
Qaaraduhu way guuraan
Business Insider wuxuu abaabulay animation, iyadoo la adeegsanayo saadaal ka socota borofisar ku xeel dheer Christopher Scotese oo ka tirsan Jaamacadda Northwest University, si loogu odoroso Dhulka malaayiin sano mustaqbalka. Oo waxay umuuqataa meel aad u kala duwan. Waxaa suurtagal ah, ka dib wareejinta joogtada ah ee taarikada, inuu imaan doono waqti ay qaaradaha dib u midoobaan iyadoo mid ah iyo qaarad weyn oo la aasaasay.
Bal qiyaas adduunyo aan qaarado iyo xuduud toona lahayn. Dhammaan waddamada adduunku waxay ku wada noolaan lahaayeen isla qayb ka mid ah Dhulka oo kaliya kuwa ku nool dhinacyada ayaa ku raaxeysan kara xeebaha iyo badda. Gaadiidka badda aad ayey uga qaalisan tahay u soo guurista gudaha waxaana jiri doona boqolkiiba intaas ka badan oo dadka aan ku socon karin xeebta si fudud.
Qaaradaha ayaa midba midka kale ka sii fogaanaya kuwa kalena waxay u midoobeen inay sameystaan ​​dhul ballaaran oo kara kara waxay sameystaan ​​qaarad-weyn. Sawirka ugu dambeeya waa adduun leh badweyn buuxisa inta badan dhinac, iyo dhul-beereedyo si wada jir ah loo riixay si loo sameeyo hal qaarad oo ka ballaaran.
Si aad si fiican u aragto, waa inaad fiirisaa fiidiyaha. Tani waa sida dhulkeenu noqon doono 250 milyan oo sano gudahood:
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Sidee ayuu dhulkeenu ahaan doonaa 250 milyan oo sano gudahood?
Imaatinka Typhoon Talim ee Japan ayaa qasbaya daad gureynta in kabadan 600 kun oo qof
VIDEO: Permafrost wuxuu u qulqulayaa sida lavaha guud ahaan plateau Tibetan